पाँच डाक्टरले धानेको जनकपुर अञ्चल अस्पताल
जनकपुरधाम- प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरस्थित जनकपुर अञ्चल अस्पताल यस भेगकै सबै भन्दा जेठो अस्पताल रहेपनि गुणस्तरीय सेवा भने प्रभाह गर्न सकेको छैन् । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई संघीय संरचना अनुसार प्रादेशिक अस्पताल बनाउने तयारी चलेपनि अस्पताल भित्र व्यापक बेथिति देखिएको छ । आवश्यक चिकित्सकको कमी र भएकाहरुले पनि इमान्दारीपूर्वक सेवा दिन छोडेपछि जनकपुर अञ्चल अस्पताल अहिले रेफर अस्पतालको संज्ञा समेत पाउन थालेको छ ।
चिकित्सक अभावमा समान्य बाहेक गंभीर प्रकृतिका उपचार हुन नसकेपछि बिमारीहरुलाई बाहिर पठाउने गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई रेफर अस्पताल भन्न थालिएको हो ।
वि.सं. २०२६ सालमा स्थापना भएको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सरकारे एक सय शैय्याको स्वीकृति दिएको छ भने अस्पताल विकास समितिले एक सय पाँच शैय्या सञ्चालन गर्दै आएको छ । बिरामीको अत्याधिक चाप रहने जनकपुर अञ्चल अस्पताल अहिले मेसु सहित पाँचजना चिकित्सकको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पतालका एक कर्मचारीले जनाए ।
नेपाल सरकारले अस्पतालमा ४५ जना चिकित्सकको दरबन्दी तोकेपनि अहिले पाँचजना मात्र कार्यरत रहेका छन् । सरकारले तोकेको दरबन्दी अनुसार अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सकको पद रिक्त रहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा.रामपरीक्षण यादवले बताए । अस्पतालमा ११ औँ तहका १० जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेपनि अन्य सम्पूर्ण पद रिक्त छ ।
अस्पतालमा प्रसुति, बाल, फिजिसियन, अर्थोपेडिक, सर्जन, इएनटी, एनेसथेसिया, रेडियोलोजी जस्ता महत्पूर्ण सेवाका विशेषज्ञ चिकित्सकक नियुक्त हुन सकेका छैनन् । अस्पतालमा ११ औँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सक १, प्रसुति विशेषज्ञ १ र बालरोग विशेषज्ञ १ जना अनिवार्य राख्नुपर्ने भएपनि यी पदहरु लामो समयदेखि खाली छ ।
यसअघि एकजना सर्जन रहेको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सरुवा गराएर गएपछि पद खाली छ । अस्पतालमा सर्जन नभएपछि समान्य दुर्घटना भएको खण्डमा समेत उपचार गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
एकजना वरिष्ठ रेडियोलजिस्टको दरबन्दी रहेपनि उनी काजमा गएपछि पद रिक्त छ । तत्काल अस्पताल विकास समितिले करारमा केहि रेडियोलोजिस्ट नियुक्त गरेर जेनतेन सेवा दिँदै आएको छ । २५ जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा १० जना दरबन्दी र १२ जना करारमा काम गर्दै आएका छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सक नभएपछि कन्सल्टेन्ट र मेडिकल अफिसरको भरमा जनकपुर अञ्चल अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले स्वीकृति दिएको एक सय शैय्याको लागि मात्र बजेट उपलब्ध गराउने गरेको छ भने बाँकी खर्च अस्पतालले आफै व्यहोर्दै आएको अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड अधिकृत राजकिशोर राउतले बताए ।
अस्पतालका सुपरिटिडेन्ट डा. यादवले आवश्यक्ता अनुसार चिकित्सक उपलब्ध नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको स्वीकार गरे । विभिन्न स्वास्थ्य मन्त्रीले पटक पटक आवश्वासन दिएपनि कार्यान्वयन फितलो भएकोले चिकित्सक नियुक्त हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको हैकमवादी प्रवृत्तिका कारण जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा आवश्यक्ता अनुसार चिकित्सक आउन सकेका छैनन् यादवले भने,‘चिकित्सक पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हैकमवादी गरेको छ ।
कि त केन्द्रबाटै पठाउनु पर्‍यो कि हामीलाई अधिकार दिनु पर्‍यो ।’ चिकित्सक पठाउन महिने पच्छिे तागेदा गरेपनि मन्त्रालयले सुनवाइ नगरेको उनको दावी छ । प्रदेश २ को आठ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेपनि चिकित्सक अभावमा अस्पतालले चाहे अनुसारको सेवा दिन नसकेको यादवको भनाई छ ।
अस्पतालको तथ्यांक अनुसार यहाँ सबै भन्दा बढी प्रसुति सम्बन्धी बिरामीको चाप देखिएको छ । अस्पतालमा वार्षिक ११ हजार प्रसुति हुने गरेको मेडिकल रेकर्ड अधिकृत राउतले बताए । त्यसैगरी ओपीडी सेवाका लागि पनि ठुलो संख्यामा बिरामीहरु अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या लिएर मासिक पाँच हजार सम्म बिरामी ओपीडीमा पुग्ने गरेका छन् भने मासिक तीन हजारको संख्यामा आकस्मिक उपचारको लागि बिरामीहरु अस्पताल पुग्ने गरेको बताइएको छ ।
पाँच वर्ष पूर्व जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा निर्माण गरिएको आइसीयू सेवा जेनतेज सञ्चालन गरिएको छ । सेवा सञ्चालन गर्न चौतर्फि दबाब बढ्दै गएपछि अस्पतालले पछिल्लो एक महिना देखि विशेषज्ञ नभएपनि जेनतेन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । २०७० असोज ६ गते बसेको अस्पताल विकास समितिको बैठकले आइसीयू सञ्चालन गर्न २३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।